LG ga -abụ nnukwu onye nrụpụta ihuenyo OLED | Androidsis
LG Ọ na-arụ ọrụ na teknụzụ OLED ya ogologo oge. The Korean emeputa chọrọ iwepu Samsung ahịa na ngosi mpaghara na ezi ihe kpatara ya. Igwe LCD na-enyekwu agba dị mma ma na-erughị ala, mana teknụzụ OLED nwere arụmọrụ ume ka mma yana agba ndị doro anya.
O yikwara ka a na-eche teknụzụ LCD maka etiti dị ka, dị ka BussinessKorea si kwuo, ụdị Asia anọ kachasị ga-amalite iji Ogwe OLED na ekwentị ọhụrụ ha dị elu. Ee, Xiaomi, Huawei, Oppo na Vivo ga-amalite ịkụ nzọ na ogwe LG.
LG ibu Samsung ibu onye ahia na ngosi ahia
Ruo ugbu a Samsung ọ bụla onye na-achị ahịa ahịa a. Cheta na ruo ọtụtụ afọ, ọ wetara ngosipụta Retina maka ngwaọrụ Apple, na mgbakwunye na ire ere na nso nso a onye nrụpụta nke Cupertino iji mee iPhone 8 ọhụrụ.
Dị ka ozi bipụtara, LG ga-ekenye 25% nke aka ya iji nye ndị ahịa ọhụrụ. Na ịhụ ka LG V30 si dị mma, ekwentị nke juru ya anya na ihuenyo ya na-enweghị atụ, o doro anya na onye Korea na-arụ ọrụ nke ọma na teknụzụ a nke ọma.
LG achọghị inwe nsogbu ọkọnọ na ogwe OLED ya, yabụ na ọ na-ezube ịbawanye mmepụta na 65.000 panel kwa ọnwa. Nke a ga-atụgharị gaa ire ere n'etiti 120 na 170 nde ngwaọrụ nwere OLED ihuenyo, azụmaahịa niile maka LG, nke ga-akwụ ụgwọ ọtụtụ afọ nke ọrụ iji mepụta otu ogwe aka nke nwere ike ịsọ mpi. Super AMOLED nke onye isi ya: Samsung.
A ghaghi ihu uzo nke a si emeghari mmeghari LG n'ihi na otu ihe doro anya: Samsung agaghi adi n'echeghi. Kedu onye ị chere ga-enweta mmeri n’ime ha abụọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG ka ibu ibu emeputa ihe ngosi OLED
Kedu ụdị akwa…
Ọ dị ka ihe ọ bụla na -aga mgbe a na -ebipụta akụkọ ...
Ee. Ajụjụ a bụ onye ga -ere karịa Samsung ma ọ bụ LG ka ndị na -akwado ya wee kwuo maka ...
Complete list of smartphones that will receive the update to Android Oreo [Emelitere]
[APK] Ikwu ndoputa ma budata ngwa nke N'ime Ndị Nwụrụ Anwụ 2 !!